सोल्टी होटलको सेयर किन्दा फसे लगानीकर्ता ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > सोल्टी होटलको सेयर किन्दा फसे लगानीकर्ता !
सोल्टी होटलको सेयर किन्दा फसे लगानीकर्ता !
काठमाण्डौं । बजारमा सोल्टी होटलले बोनस वितरण गरेर नै पूँजी बढाउने हल्ला चलेको भए पनि होटलले त्यस्तो नभएको भन्दै बजारमा चलाइएको हल्ला निराधार भएको जनाएको छ । यो जानकारीसँगै हिजो आइतबार सेयर बजारमा सोल्टी होटलको सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरु नराम्ररी झुक्किन पुगेका छन् ।
नेप्सेमा अत्यन्त भारी अन्तरको गिरावट आइरहेका बेला हिजो आइतबार लगानीकर्ताहरु पूर्ण रुपमा सोल्टी होटलको सेयर प्रति आकर्षित हुँदा प्रतिकित्ता शेयर मुल्य झण्डै १० प्रतिशतले बढ्न पुगेको थियो । प्रतिकित्ता १० रुपैंया अंकित मुल्य रहेको होटलको शेयर मुल्य बोनस बितरणको समाचार केही सञ्चार माध्यममा आए पछि एकाएक बढ्दा ३५ रुपैंयाले माथि चढेर ३ सय ९२ रुपैंया पुगेको थियो ।
विदेशी लगानी समेत रहेको होटलले त्यसरी प्रकाशित समाचार होटलको योजना अनुरुप नभएको भन्दै आज नेप्सेलाई एक पत्र मार्फत् जानकारी गराएकोछ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिममा होटलको शेयर पूँजी १ अर्ब ५० करोड रहेको र त्यसमा कुनै परिवर्तन नभएको होटलले प्रष्ट पारेको छ ।
उसले स्थिर पूँजी र चालु पूँजी गरि कुल २ अर्ब ९० करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैंया स्थिर पूँजी रहेको र विदेशी लगानी रहेकाले उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ । होटलमा होलिडे इन्स इन्भेष्टमेण्ट नेपाल लिमिटेड हकंकगंको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
२४ जेठ २०७३, १२.००
२०७३ जेष्ठ २४ गते १३:०७ मा प्रकाशित
४ प्रतिशतले घटाए बैंकहरुले ऋणको ब्याज !
नेशनल हाइड्रो पावर अनिश्चितकालका लागि बन्द !
सवारीसाधनको भाडादर मनपरि, यात्रु मारमा
मासिक पाँच सय रुपियाँमा काम गर्दै सरकारी कर्मचारी
तयार रहनुहोस्, हाइड्रोपावर कम्पनीको ७६ लाख कित्ता आइपीओ खुल्दैछ
एमाले महासचिव भन्छन, ग्राण्डडिजाइन अनुसार प्रदेश–२ को निर्वाचन सारियो